ကိုယ်တိုင် မခံစားရ သေးလို့ သွေးအေးနေတဲ့ လူတွေ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒဲ့ပြော လိုက်တဲ့ နန်စန္ဒာလှထွန်း…… – Shwe Naung
ကိုယ်တိုင် မခံစားရ သေးလို့ သွေးအေးနေတဲ့ လူတွေ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဒဲ့ပြော လိုက်တဲ့ နန်စန္ဒာလှထွန်း……
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေများစွာ ရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ် အခိုင်အမာနဲ့ အောင်မြင် နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောနန်းစန္ဒာလှထွန်းက တော့ တော်လှန် ရေးတိုက်ပွဲ ကြီးမှာလည်း ပြည်သူ တွေနဲ့အတူ ပါဝင်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
နန်းစန္ဒာလှ ထွန်းကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ အစပိုင်း ကတည်းက အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ဖို့အတွက် လမ်းပေါ်ထွက် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တစ်ထောင့် တစ်နေရာ ကနေ ပါဝင်အာ းဖြည့် နေသူလည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။
ကျဆုံးသွားကြတဲ့ သူရဲကောင်း ပြည်သူတွေအတွက်လည်း တတ်နိုင် သလောက် ဖေးမ ကူညီတတ်တဲ့ နန်းစန္ဒာလှထွန်းကတော့ လတ် တလောအခြေအနေ တွေမှာ သွေးအေးသွား ကြသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာပါတယ်..။
တချို့ မိသားစုတွေ အတွက် ပြန်မရနိုင် တော့တဲ့ ဆုံးရှုံးမှု တွေများစွာရှိပေမယ့် ကိုယ်တိုင် မခံစားရလို့ သွေးအေးသွားကြတဲ့ လူတချို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိထိ မိမိ ဖွင့်ဟ ပြောပြလာ တာ ဖြစ်ပါ တယ်..။
“မင်းက တော်သေးတယ်” တော်သေးတာပေါ့ မျက်လုံးကို ကျည်ထိသွားတဲ့ ကလေး‌လေးဟာ မင်း သမီးလေး မဟုတ်လို့ တော်သေးတာပေါ့ တေ ာ်သေးတာပေါ့ သေဆုံးသွား တဲ့ အယောက် (၇၀၀)ကျော်ထဲ အဖမ်းခံ နေရတဲ့ လူထောင် ကျော်ထဲ မင်းမိသ ားစု မပါတာ တော်သေးတာပေါ့
လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားလို့ အလုပ်မရှိတဲ့ကြားထဲ ခုန်တက်သွားတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ ညှိပြီး ထိန်းစားနေရတဲ့ ညနေစာ ထမင်းဝိုင်းထဲ မင်းမိသားစု မပါတာ တော်သေးတာပေါ့ ယုံကြည်မှု တွေရပ်တန့်လို့ စုထားတဲ့ ချွေးနည်းစာအတွက်
ကိုယ့်ငွေကို ငွေနဲ့ ပြန်ဝယ်ရတဲ့ထဲ မင်းမပါတာ တော်သေးတာပေါ့ လက်နက်ကြီးကျမှစိုးလို့ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးရတဲ့ထဲ မင်းတို့ မပါတာ တော်သေးတာပေါ့ ဒီရက် အတွင်းမှာ ထိခို က်သွားတဲ့ဘဝတွေထဲ မင်းမပါဘဲ ရယ်ကျဲကျဲ နေနိုင်သေးတာ တော်သေး တာပေါ့
မင်းနေရာ နေရိပ်သေးတာ ဝမ်းသာ ပါတယ် ဒါပေမယ့် အပြင်မှာရော ရင်မှာရော နေပူရှိန် ပြင်းတယ် သူငယ်ချင်း မင်းအိမ် က မဟုတ်လို့ မင်း မကြားသေးတာပါ ငိုသံတွေက လမ်းမမှာ…” ဆိုပြီး ပြောပြ ထားတာပါ..။
နန်းစန် ဒာလှထွန်းရဲ့ အဲ့ဒီပို့စ်အေ ာက်မှာတော့ ပရိသတ် တွေကလည်း သူမရဲ့ခိုင်မာ ပြတ်သားတဲ့ စိတ်ထားတွေကို ချီးကျူးကာ အားပေးစကားတွေလည်း ပြောထား ကြတာ တွေ့ရပါ တယ်..။
Source: Nan Sandar Hla Htun’s Fb Acc
အကိတ်စား အတွင်းသား လေးတွေကို အထာကျကျ ချပြနေတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……….
ရင်ဖိုစရာ ‌အလှအပတွေနဲ့ အမိုက်စား ပိုစ့်ဆန်ဆန်လေးတွေ ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် မိုးပွင့်ဖြူရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……….
မို့မောက် ပြည့်တင်းလှတဲ့ ရွှေရင်မွှာလေးကို အထာကျကျ လှစ်ဟ ပြသနေတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အကြမ်းစား ပုံရိပ်လေးများ………..